Naya Post Nepal | कस्तो अचम्म ! भान्जी लिएर मामा फ’रार, छोराछोरीको बिचल्ली भएको भन्दै श्रीमती रु’दै मिडियामा (हेर्नुस भिडियो)
कस्तो अचम्म ! भान्जी लिएर मामा फ’रार, छोराछोरीको बिचल्ली भएको भन्दै श्रीमती रु’दै मिडियामा (हेर्नुस भिडियो)
पाचथर जिल्लाको फिदिम निवासी प्रीती लामि छाने नाम गरेकि एक महिला आफ्ना श्रीमानले भान्जी लिएर फ”रार भएको भन्दै आफ्ना काखका दुई छोरा र छोरिलाइ साथमा लिएर सहयोगको अपेक्षासाथ आफ्ना पी”डा अनि ब्य”था सुनाउन मिडि यामा आएकिछिन ।
कार्तिक २३ गतेका दिनदेखि उनका श्रीमान र उनैकि भान्जी दुबैजना फ”रार भ,एका छ्न ।आफ्नो श्रीमानलाई फोन गर्दा नलाग्ने र भान्जी पनि आफन्तमा बुझ्दा कहिपनि नरहेकोले उनि हरु दुइजना भा”गेको निश्चित रहेको बताउछिन उनि ।
भान्जी पनि बिबाहित नै रहिछिन र बच्चा पनि साथमा नै लिएर उनि फ”रार भएको कुरा उनले खुलाइन । पहिला आफ्नो आमा जुको सौता बनेर गएकी भान्जिले अहिले आफ्नो पनि घर बार बिगारेको भन्दै खु,ब दु”ख मानिन उनले ।
आफ्नो श्रीमान भान्जिसगै बस्ने उनिसगै घुम्ने र आफुलाई भने जहिले हे”लाको दृष्टि,कोणले हेर्ने र कहिले राम्रो शब्दले नबोला उने गरेको बताउ छिन उनी । आफ्नो श्रीमान भान्जीसग पहिले देखि बोल्ने गरेको ब,ता,उछिन उनी ।
क”ठै ब”रा क,तिपटक त म”र्ने प्र,यास पनि गरिछिन उनले तर दुई दुई बालबच्चाकी आमा, बाबुलाइ जस्तो सजिलो कहाँ छ र, आमाको मन न हो, छोराछोरीको मायाले नै त्यसो गर्न नसकेको बताउछिन उनी ।
श्रीमान कहिलेको दिनमा खुसि भने नदिएको र सधै उसले दिएको पी”डा सहेर बाचेको बताउ छिन उनि । क”ठै ती बा,लाखा छोरा म,ज्जाले बोली पनि फुटेको छैन तर बाबू भने उनै अ”बोध बालकलाइ टुहुरो बनाएर हिडेका छ्न ।
मायालाग्दो पाराले ग्वा”ग्वा रु”ए ती बालक । दसैको दिनमा मामा भान्जी मिलेर हात समेत लगाएको बताउछिन उनि । भान्जिलाइ किन तिमी मेरो घर बि”गार्छौ भनेर राम्रो मुखले सम्झा उदा श्रीमान र भान्जी मिलेर नि”र्घात कु”ट”पि”ट गरे को बताउछिन उनि ।
श्रीमान र भान्जिको कु”टाइबाट आफू अस्पताल पुगे,,को बताउछिन उनि । श्रीमानले कहिलेपनी आफु र छोराछोरीलाइ नहेरेको र खानको लागि घरमा केही नभएको बताउछिन उनी ।
क”ठै नानिहरुले लगाएको कपडासमेत दिदिको नानिहरुसग मा”गेर लगाइदिएको बताइन उनले । आफु न्यायको लागि त”ड्पिरहदा न्याय नपा एको र सबैले खि”ल्लीमात्र उडाउने गरेको बता उछिन उनी ।
रु”दा रु”दा आखाका आसु,हरु पनि रि”त्ति”इस केको बता उछिन उनी । श्रीमान कहिलेका दिन मा राम्रो बोलिबचन र व्य,बहार नगरेको र आफु ले भने श्रीमानको खुसिको लागि स,बथोक त्या”गेको बताउछिन उनी ।
श्रीमानलाई बु,झेर आफुले लगाउन मन लागेको कुराहरु पनि नलगाएको र खान मन लागेको कुरा पनि नखाएको बताइन उनले । यस्ती श्रीम तीलाई छो”डेर आ,खिर किन आफ्नै भा न्जी लिएर भा”गे त उनि ?
२०७८ पुष १५, बिहीबार प्रकाशित 1 Minute 221 Views